Sajhasabal.com | पछिल्लो २४ घन्टामा ३१६ सङ्क्रमित थपिए, कुन-कुन जिल्लामा कति सङ्क्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्
पछिल्लो २४ घन्टामा ३१६ सङ्क्रमित थपिए, कुन-कुन जिल्लामा कति सङ्क्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्
असार १६, काठमाडौँ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण ३१६ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले गत २४ घण्टामा २४५ पुरुष र ७१ महिलामा सङ्क्रमण देखिएको बताउनुभयो ।